myanmar-jobs | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section 1 » myanmar-jobs
Accounting & Finance (497) Admin, Secretary & PA (363) Architecture & Design (58) Automobile, Aviation & Aerospace (66) Banking & Insurance (115) Call Centre & Customer Service (82) Construction & Skilled Trades (288) Driver, Security & Cleaning (118) Education, Teaching & Childcare (84)
Engineering & Technical (581) Farming, Agriculture & Outdoor (53) FMCG – Consumer Goods (303) Graduate (145) Hospitality & Tourism (248) HR, Training & Recruitment (188) IT, Hardware & Software (325) Legal & Compliance (40) Manufacturing & Warehouse (265)
Marketing, Media & Creative (542) Medical, Doctor & Nursing (56) Microfinance & Financial Services (127) NGO, Charity & Not for Profit (43) Oil & Gas (40) Pharmaceuticals (69) Procurement & Purchasing (90) Property & Real Estate (23) Public Sector & Government (25)
Retail & Supply Chain (130) Sales & Business Development (785) Science, Research & Analysis (31) Senior Management (165) Shipping, Freight & Logistics (83) Telecom (136) Translator & 2nd Language (64) Other (262)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ခေတ်စားမည့် အလုပ်များကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေခြင်း
Fri 07 Feb 2020 - 10:49
ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက် ဘဝရည်မှန်းချက်တွေရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံကြမှာပါ။ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေထားဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်က ဘာတွေလဲဆိုတာကို မသိတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကို သေချာသိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းအချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
Tue 25 Jun 2019 - 16:57
လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းပါဘူး။ တစ်ချို့အမှားက ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို လုပ်ငန်းခွင်က ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီလိုအမှားမျိုးလုပ်မိပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Fri 21 Jun 2019 - 14:53
အလုပ်အသစ်အတွက် အင်တာဗျူးဖြေပြီဆိုရင် အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့သူဘက်ကတော့ အရင်အလုပ်က ဘာကြောင့်ထွက်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မေးမှာပါပဲ။ အဲ့လိုမေးခွန်းမေးခံရပြီဆိုရင် ဖြေဖို့ကို အနည်းနဲ့အများတော့ အကျပ်တွေ့ကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီမေးခွန်းကို အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကို ရှာဖွေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Wed 19 Jun 2019 - 15:17
ကိုယ့်မှာ career inspiration ရှိဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိအလုပ် ဒါမှမဟုတ် ရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်က ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိဖို့ကို စဉ်းစားပြီးမှ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကို ရှာဖွေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်လို့ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန် အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့နေ့တွေက လောကငရဲလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစ်ိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ဝေဒနာကို ခံစားနေရတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလို့ မထင်ပါနဲ့။ လေ့လာချက်တွေအရ အမေရိကန်က အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၆ မီလီယံခန့်က သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့တစ်နှစ်တာကာလမှာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာပါ။
Mon 10 Jun 2019 - 09:57
Fri 07 Jun 2019 - 16:24
အလုပ်မှာ နာမည်ကောင်းရတာက မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတိုးများလာရုံသာမကဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းလည်း ကောင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ နာမည်ကောင်းရပြီဆိုရင် promotion ရနိုင်ဖို့ အလားအလာလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ အလုပ်မှာ နာမည်ကောင်းရဖို့အတွက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
Sat 01 Jun 2019 - 16:33
အလုပ်တစ်နေကုန်လုပ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ မောပန်းနွမ်းနယ်နေတယ်လို့ ခံစားနေရသေးလား? ဒါဆိုရင်တော့ အလုပ်ဒဏ်ပိနေပါပြီ။ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စား၊ အိပ်ချိန်လုံလောက်အောင်အိပ်ပြီး ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူဖို့ လိုနေပါပြီ။ ပြီးတော့ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝ ညီမျှမှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။
Thu 30 May 2019 - 13:11
လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းဖို့ဆိုတာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့ လိုတာပါ။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရင် အလုပ်လုပ်တာ ပိုမြန်၊ ပိုတော်လာပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
အောင်မြင်တဲ့ career တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့
Tue 28 May 2019 - 17:23
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အောင်မြင်တဲ့ career တစ်ခုကို အရင်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်တဲ့ career တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
အလုပ်ကြိုးစားပြီး အလုပ်လုပ်တာတော်တာကို ဘာကြောင့်အလုပ်ထုတ်ခံရတာလဲ
Thu 23 May 2019 - 11:16
တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေက အလုပ်လည်းကြိုးစားတယ်၊ အလုပ်မှာလည်းတော်ရဲ့နဲ့ အလုပ်ထုတ်ခံရတာတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်ကြိုးစားပြီး အလုပ်လုပ်တာတော်တာကို ဘာကြောင့်အလုပ်ထုတ်ခံရတာလဲ။ အကြောင်းအရင်းကတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့၊ သတိမထားမိတဲ့အမှားသေးသေးလေးတွေကြောင့်ပါ။ ဘယ်လိုအမှားတွေက အလုပ်ထုတ်ခံရလောက်တဲ့အထိ ဆိုးရွားနိုင်လဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေနဲ့ စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး
Tue 21 May 2019 - 12:24
တစ်ချို့သူတွေက လူအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောရမှာကြောက်သလို ကိုယ်မသိတဲ့၊ မရင်းနှီးသေးတဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောရမှာကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ စကားမပြောဘဲနေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသေးတဲ့သူတွေနဲ့ စကားစပြောဖို့ဆိုရင် သတ္တိရှိဖိုိ့လိုသလို ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သတ္တိရှိပြီး ကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင် စကားမှားပြီး ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သတ္တိရှိတာကို ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြောတဲ့စကားတိုင်းက အောင်မြင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းလည်း ရှိနိုင်သေးတာကြောင့် ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေနဲ့ စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
အင်တာဗျူး မေးသူကို ပြန်မေးသင့်သော မေးခွန်းများ
Fri 26 Apr 2019 - 11:09
Interview နောက်ဆုံးမှာ "What kind of questions do you have?, Any questions" အစရှိတဲ့ မေးခွန်းမေးလာခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လို မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းသင့်သလဲ ... ? များသောအားဖြင့် ... ငါအနေနှင့် ခံစားခွင့်တွေက ဘာလဲ... ခွင့်ဘယ်နှစ်ချက်ရမှာလဲ ....
ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင် (သို့) လုပ်ငန်းခွင်အသစ်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်အောင် နေကြမယ်
Fri 26 Apr 2019 - 10:26
၁။ ပုံမှန်ခေတ္တအနားယူပါ။ (တစ်နေကုန် အလုပ်ကြီးပဲ လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်နာရီ (သို့) နှစ်နာရီခြားတစ်ခါ မိနစ်အနည်းငယ်အနားယူသင့်ပါတယ်)
အလုပ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်တိုက်ခိုက်မှုရှိလာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Thu 25 Apr 2019 - 13:52
တိုက်ခိုက်လာတာတွေကို အနိုင်ယူတာထက် ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာက ပိုပြီးကောင်းပါ တယ်။ အလုပ်မှာကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်လာတာတွေကို ဒီနည်းတွေသုံးပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပါ တယ်။ ၁။ အရှုပ်အရှင်းတွေကို စောစောစီးစီးဖြေရှင်းပါ။ ပြဿနာတွေကို စတာနဲ့ ဖြေရှင်းပါ။
ထောက်ခံချက်တွေမရှိပဲ အလုပ်ရအောင် ဘယ်လိုလျှောက်ကြမလဲ
Thu 25 Apr 2019 - 13:50
အလုပ်ရှာနေစဉ် ဒါမှမဟုတ် အလုပ်လျှောက်နေစဉ်မှာ ထောက်ခံချက်မရှိတိုင်း အမြဲအဆင်မပြေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားထောက်ခံချက်တွေကိုလဲ သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြစ်တင်ခံရတာတွေကလွတ်အောင် ဘယ်လိုနေမလဲ
Thu 25 Apr 2019 - 13:49
ကိုယ်မလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကို မှားယွင်းစွပ်စွဲလာရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရပါ့မလဲဆိုပြီး တွေဝေနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မှားယွင်းစွပ်စွဲမှုမရှိစဉ်ထဲက ကြိုတင်ပြီး အပြစ်တင်မခံရအောင်နေပြထားတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ ၁။ အကောင်းမြင်ပါ။
Thu 25 Apr 2019 - 13:48
၁။ ပွင့်လင်းတဲ့အပြုံး အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ မှုန်ကုပ်ကုပ်မျက်နှာ၊ အပြုံးအရယ်မရှိတဲ့ မျက်နှာသေနဲ့ သွားဖြေတာက ဒီအလုပ်ကို စိတ်မဝင်စားပါဘူးလို့ ပြောပြနေတာနဲ့ တူတူပါပဲ။ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ရင်းနှီးမှုကို ဖော်ပြတာမို့ သင့်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ဒီအပြုံးလေးနဲ့ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်တဲ့။
Thu 25 Apr 2019 - 13:46
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ